Roofa Lorcaserin hydrochloride hemihydrate powders (856681-05-5) Phcoker
SKU: 856681-05-5 Sokajy: Weight Loss
Solubility Water Solubility 0.0709 mg / mL
Application Rohoho Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ny vovoka nampiasaina ho fitaovana fanodinkodinana fanoherana. Manana andraikitra amin'ny maha-tendron-drivotra azy sy ny agonist serotonerika izy io.
Lasan-kiraro hydicarboride ny homeridra (856681-05-5) Mechanism of Action
Ny hormonina hydrochloride hemihydrate poids dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fitsaboana mainty hoditra amin'ny olon-dehibe manana endri-body (BMI) amin'ny 30 na bebe kokoa (obese) ho fanampin'ny sakafo fihinan'ny kaloria sy fampiharana. Azo ekena ihany koa ny fampiasana olon-dehibe amin'ny BMI amin'ny 27 na mihoatra (be loatra) ary misy farafahakeliny ny fepetra mifandray amin'ny lanjany, toy ny fitsaboana goavana (hypertension), na ny kolesterol avo (dyslipidemia). Na izany aza dia mety misy fiantraikany hafa koa izany. Araka ny ambany: